iPhone 6 | Wararka IPhone
iPhone 6, wax kasta oo aan dooneynay, ka weyn oo ka awood badan. Midka ugu khafiifsan ee abid lagu abuuray kaliya 0,69cm, sidoo kale ugu awooda badan. 4,7-inch Retina HD bandhig oo leh qaraar 1334 × 750 pixels. Hadda waxay la timid walaal ka weyn, iPhone 6 Plus, oo leh astaamo isku mid ah laakiin shaashad 5,5-inji ah halkii laga siin lahaa 4,7.
Un naqshad cusub oo wareegsan, oo leh shaashad wax yar u wareegsan dhinacyada, hab cusub oo loo dhigo anteenooyinka si aan hore loo arag, iyo dhammaantood leh 3 midab oo aad ugu guulaystay qoraalkii hore, cirro bannaan, lacag iyo dahab.
Gudaha qaabkeeda 64-bit, a processor A8 cusub oo ay weheliso hawlwadeenka dhaqdhaqaaqa M8. Wax kasta oo lagu sameeyo qalab ilaa 50 jeer ka awood badan iPhone-kii ugu horreeyay.
Kamaradiisu wax badan kama hagaajiso sawirada, waxay haysaa 8MP laakiin waxay hagaajineysaa dareenka Focus Pixel; yahay fiidiyowga halka uu ku siinayo qoraalka oo leh fiidiyow 1080p ah iyo illaa 240fps duubista dhaqdhaqaaqa oo gaabis ah.
Dhamaan waa dhakhso, wax walbaa way kafiican yihiin. Isku xirnaanta, xawaaraha WiFi, xogta, Aqoonsiga Taabashada, lacagaha moobilka, NFC, Dareere cusub oo barometric ah ... iyo dhammaantood oo ay weheliso macruufka 8, nidaamka ugu sareeya ee mobilada ilaa maanta.
IPhone 6 ayaa la imaan doona saddex ikhtiyaar ikhtiyaari ah, 16GB oo loogu talagalay 699 euro, ka dib waxaan u boodnay 64GB oo ah 799 euro ugu dambeynna 128GB 899 euro.
Wararkii ugu dambeeyay ee iPhone 6
Soo hel dhammaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan iPhone-ka cusub ee 6-inji ah.
Wicitaanka Kooxda FaceTime uma shaqeynayo dhammaan macruufka 'iOS 12' iPhones iyo iPads
Maalmo ka hor, Apple waxay soo saartay macruufka 12.1, oo ah casriyeyn na siisay awood aan ku samaysan karno wicitaanno sida ugu cusub ...
by Carmen rodriguez samee 4 sano .
Dhamaanteen waan ognahay dhibaatooyinka iOS 8-da cusub uu bixinayo waxaan sugeynaa cusbooneysiinta sida biyaha May, laakiin ...
'Cusub' 6GB iPhone 32 ayaa dib loogu iibiyay Aasiya
Xaaladdan oo kale waxaan la kulannaa war xoogaa la yaab leh iyo in ka badan haddii aan tixgelinno in buugga ...
by Pablo Aparicio samee 5 sano .
UPDATE: Apple Insider wuxuu sheeganayaa inuu la xiriiray Apple isla markaana kuwa ku sugan Cupertino ay beeniyeen warkan. Ilaa…
Wax yar ka dib markii iPhone 6 uu iibka ahaa ayaa la ogaaday inuu ku laaban yahay xoogaa "fudayd" ...
Fiidiyow ah iPhone 4-inji cusub ah ayaa soo muuqda. iPhone 6c: ma adigaa?
by Pablo Aparicio samee 6 sano .
Horey ayey ujireen, waxaan dhihi lahaa tiro lahayn, warar xan iyo macluumaad nooga sheegay 4-inch iPhone….
IPhone 6c wuxuu yeelan doonaa batari iyo RAM ka badan 5c [RUMOR]
Maalin xan. Haddii daqiiqad kahor aan kahadleynay war xan ah oo markale nooga sheekeynaya iPhone iska caabin ah ...
Furashada Kiiska iPhone 6 Smart Battery
by Ignacio Sala samee 6 sano .
Marka laga soo tago dhammaan khilaafaadka iyo iyada oo aan jirin warar xan ah, Apple ayaa naga yaabisay Talaadadii hore iyada oo la bilaabay ...
Xanta cusub ayaa leh "iPhone 6c" ayaa imaan doonta guga
Qaar badan oo aad u kala duwan ayaa ah xanta ka hadlaysa iPhone 6c, laakiin wararkaas xanta ah waxay kaliya leeyihiin hal dhibic ...